Ahoana ny Hackers Hack - Fanontaniana momba ny Semalt Expert
Ao anatin'ireo tranga rehetra ao anaty aterineto misy serivisy iray, matetika dia mety hitera-pahavoazana. TheNy Internet dia ahitana mpampiasa mandefa sy mandray ny vaovao amin'ny mpizara. Vokatr'izany, ny ankamaroan'ny fivoaran'ny tranonkala dia mifantoka amin'ny mpampiasa sytsy ny fahamendrehan'ny rafitra. Noho izany antony izany dia mamorona tranonkala e-commerce ny olona izay afaka manao ireo asa ireo amin'ny endrika fakan-tahaka,Ny tsy firaharahiana ny zava-misy dia mety hampiasa io fahafahana io ihany koa ireo olona manana fikasana ratsy. Vokatr'izany, ny fiarovana ny tranokalanao sy ny an'nyNy mpanjifanao dia miankina amin'ny fomba mahomby afaka miady amin'ny fanandramana hack - software para fotografia profesional.
Misy fomba maro ahafahan'ny olona manamboatra ny entany. Ny tanjon'ny hackers diajereo ny fidirana tsy nahazoan-dalana an-tserasera ary mahazo ny fidirana amin'ny fampahalalana izay mitoetra hafa ao amin'ny database server. Amin'ny toe-javatra sasany, afaka miezaka izy ireoMitondrà vohikala manidina mampiasa botnets na fitaovana ratsy hafa. Olona maro izay manao tranokala toy ny bilaogy na tranonkala e-commerce manontany tenaahoana no fomba hanatanterahan'ny hackers ny hacks. Ho an'ny iray amin'ny fametrahana ny fitaovana sy ny fepetra fisorohana ny hackers, ilaina ny mahafantatra ny hackerstranonkala hack.
Jack Miller, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia mamaritra ny fomba sasany, izay mampiasa hackers, toy ny etsy ambany:
Cross Attack Site (XSS)
Ireo no solon'anarana azo ampiasaina amin'ny serasera izay afaka mihazakazaka amin'ny servera ary manafika vulnerablesolosaina..Ny hacker dia manomboka amin'ny famitahana ny mpampiasa mba hanindriana rohy mampidi-doza. Ity rohy ity dia manasongadina script ao amin'ny navigateur, izay misy nyNy hacker dia mahita ny lakandran-java-mampiasa fampiasana hafa. Ohatra, ny hacker dia afaka maka ny angona lohamilina toy ny tenimiafina sy ny cache. Ny hackerdia afaka mampiasa ihany koa ireo endri-tsarimihetsika toy ny mikrôfo sy ny webcam raha tsy misy ny faneken'ny niharam-boina.
Ity fampiasana ity dia mampiasa ny vulnerability amin'ny fiteny sasany amin'ny programa. izanyNy fitrandrahana dia miasa matetika amin'ny tranokala izay manana rafitra code tsy mahomby. Ohatra, ny tranonkala PHP dia mety hianjadian'ny fanafihana SQL.Ny hacker dia miezaka ny miditra amin'ny tranokalan'ny tranonkala ary mahazo ny angona rehetra. Fampahalalana toy ny antontan-kevitra momba ny orinasa, ny mpampiasa mpampiasa, ary ny trosaNy haino aman-jery katolika dia lasa mora amin'ny fomba toy izany. Ankoatra izany, ilay mpanafika dia afaka maka download, mampakatra na manova ny saha ao amin'ny andry sy ny andalanany angona ampiasainao. Amin'ny tranga hafa dia mety hampiasa ny fanontana nataon'i Packet ny hackers, izay anangonany ny angon-drakitra rehefa mandalo eo amin'ny serverary ny mpampiasa.
Rehefa manao tranokala isika, dia tsy mahatsapa ny mety ho voka-dratsin'ny hackersmametraka ny orinasa e-varotra. Vokatr'izany, tranonkala maro no natsangana hanompo mpanjifa tsy misy hacker ao an-tsaina. Afaka manatanteraka ny hackersfomba maro amin'ny tranonkala iray, ny ankamaroany dia mety hahitana ny fangalarana, ny hosoka na ny fanafoanana ny vaovao tsy miankina. Raha fintinina, ny fiarovana anaoNy tranokala, toy ny an'ny mpanjifanao, dia miankina aminao, ny tompony ary ny admin. Ny ankamaroan'ny ezaka fanentanana amin'ny fampielezan-kevitra (SEO) dia mikendry ny hitombony fahamendrehan'ny tranonkala iray sy ny fahitana SERP. Ny hackers dia afaka manangana tranonkala amin'io lafiny io. Ny fahalalana momba ny fomba fiasànadia afaka manavotra orinasam-pandraharahana lehibe sy manampahefana eo amin'ny sehatry ny sehatra momba ny fiarovana noho ny fiarovana.